OpenID Yakagadzwa uye paiyo Yakagadzirira! | Martech Zone
OpenID Yakagadzwa uye paiyo Yakagadzirira!
Svondo, Kukadzi 25, 2007 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Kana usati wanzwa nezvazvo OpenID, inonakidza tekinoroji nyowani pawebhu. Zvichipa ese akasiyana mawebhusaiti uye marogi / mapassword ayo munhu aanofanira kuyeuka mazuva ano, tekinoroji iyi inogona kuve ropafadzo kana kutuka.
Padivi rakajeka inyaya yekuti iwe unochengetera yako yakavharidzirwa yekunyoresa uye password pane yako server uye chero nguva iwe yaunopinda chero kupi, inodzosera kumashure kune yako server. Padivi rakashata ndiko kunozivikanwa se 'imwechete poindi yekutadza'. Kana mumwe munhu achigona kuratidza kushandisa kwako login uye password, saka vanogona kuwana chero sisitimu iwe yaunowana kuburikidza neOverID.
Heino mhedziso pfupi pane OpenID:
Ini pandinowedzera kudzidza nezve OpenID, ini ndinowedzera tariro. Pakutanga ndanga ndichinyumwa, asi ndichigadzirisa uye ndichiona mashandisiro ayo, ndinofunga inyanzvi yehunyanzvi. AOL, Microsoft uye SixApart ndivo vashoma vevanhu vachangoburwa kutsigira OpenID, zvinoita kunge iri kutora chiutsi.
Chimwe chezvinhu zvikuru nezve OpenID ndechekuti iwe unogona kuitambira iyo chaiyo pane yako wega server. Ndakagadzirisa phpMyID manheru ano mumaminetsi mashoma uye yakaedza ikashanda zvakanaka. Ini ndakasarudza sarudzo yakapusa yeSystem Mushandisi yekumisikidza saka ini ndaifanira kungoita zvishoma zvinhu:
Gadzira dhairekitori idzva pane yangu server uye isa mafaera. Ini ndakasarudza / OpenID /
Ini ndakawedzera redirectors kune rangu reWordPress musoro faira iro rinodzoreredza chero OpenID zvikumbiro
Ini ndaifanira kumisikidza password yangu nekunyorera yangu yekupinda, nzvimbo (iyi phpMyID), uye password. Kuti ndiite izvi, ndakaburitsa faira rePHP kumusoro kuseva nekodhi inotevera:
Ini ndakateedzera iyo yakavharidzirwa tambo mune yekumisikidza yeiyo ID faira uye ini ndanga ndamuka uye ndichimhanya!
Kuti ndiedze, ini ndaingofanirwa kupinda ndichishandisa URL yakapusa
Ndizvozvo! Kero yangu yeOverID ikozvino http://martech.zone uye ichave ichisimbisa iyo Login nePassword yandakasarudza.
Imwe yeimwe Nice ficha isina kutaurwa nevanhu nezve iko kushandisa kweiyo default ruzivo iyo yakasimbiswa application inogona kuwana. Iwe unogona kuita kuti zita rako, zuva rekuzvarwa, nguva yenguva, mukadzi uye rumwe ruzivo ruwanikwe kuti ushandise. Ini ndinoda iro zano! Mafomu mashoma ekuzadza.
Pane zvakawanda zvakawanda nhau pane iyo blogosphere pane OpenID, ini ndinokuraira iwe kuti uverenge zvimwe usati waita yako sarudzo:
Uchishandisa OpenID Delegation - Phil Windley
Chirevo pane Technorati's WTF
Kana pasina chimwe chinhu, OpenID chirongwa chakapfava chekusimbisa icho, kana chikagamuchirwa, chinofanira kurerutsa kusimbisa pane mamwe mawebhusaiti. Ndinovimba ichaputika chaizvo kunyangwe ini ndisiri kuzowana account yangu yekubhangi nayo chero nguva munguva pfupi (uye ini handidi). Kana iwe uchida kukwira pane iyo OpenID bandwagon, ini ndaizozviita nekukurumidza kuitira kuti iwe ugone kuwana imwe yekutanga yekudhinda inoenda nayo.
Tags: openidchiratidzo panechiratidzo chimwe chete
Kupeta nemaLaptops… nedzimwe nzira
Kukadzi 25, 2007 na12: 28 PM
Ndakaedza nhasi ne Magnolia. Magnolia akashanda uye akatobatanidza account yangu neOverID yangu - inotonhorera kwazvo. Nekudaro, chero ivo vasina kuendesa chikumbiro changu pane yangu musoro faira kana redirect yacho isiri kushanda nemazvo. Ini ndaifanirwa kuisa chaiyo URL mukati meiyo OpenID munda kuti iite kuti ishande.
Kukadzi 26, 2007 na7: 15 PM
Doh! Ita shuwa yako
OpenID MaList Lists
Kukadzi 25, 2007 na9: 28 PM
Wakatarisa kushandisa iyo wp plugin yeakavhurika?
Sezvo ini ndichiona kuti vashandisi vako panguva ino, havafanirwe kunge vakavhurika kuti vataure.
Kukadzi 25, 2007 na11: 24 PM
Alpesh, ndiyo here OpenID Inopa WordPress Plugin?
Kukadzi 25, 2007 na11: 28 PM
Imwe plugin. Ini ndanga ndichireva OpenID naVerselogic.
Ndeupi angave ari nani? 🙂
Kukadzi 25, 2007 na11: 33 PM
Handina chokwadi! Zvichida vamwe vaverengi vanogona kupindawo pahurukuro. Pasina kupokana kuti vese vari vaviri vanokwanisa… OpenID zvechokwadi tekinoroji yakapusa iyo inogona kuchinjika kuita plugin. Kutenda nekuwedzera!
Kukadzi 25, 2007 na11: 36 PM
Hapana kunetseka. Hongu, ndingafarire kuverenga zvinotaurwa nevamwe. Uri kuronga kuti makomenti ako 'avhure id' ed 😉
Kukadzi 25, 2007 na11: 56 PM
Handifungi kudaro. Ini ndaona panopinda chero pamazita kazhinji kunogumira mune mashoma makomendi. Makomendi chinhu chakakosha cheblog uye chinotungamira kune yakawedzera Injini yekuisa kuiswa nekuti iro peji rinochinja uye rinowana reindexed. Muchokwadi, zvakapesana, ini ndinokurudzira vanhu vazhinji kuti vataure nekushandisa Kwete Nofollow.
Ini handidi kuita chero chinhu kutadzisa chero munhu kuti ataure. Kana OpenID ikaenda zvakanyanya uye vanhu vakajairira kupinda mukati kuti vape mhinduro, zvinogona kuchinja pfungwa dzangu.
Kukadzi 25, 2007 na11: 59 PM
Kukadzi 26, 2007 na4: 04 PM
Doug, iyo verselogic plugin haidi OpenID yekupindura, inongowedzera iyo senge sarudzo. Vashanyi vanogona kutaura nezita / email / url combo senguva dzose. Ndakatanga kuishandisa pane yangu saiti kwete kare kare.
Kukadzi 26, 2007 na5: 56 PM
Izvo zvinotaridzika zvakanaka! Ini ndinogona kuita kuyedza nayo uye makomendi plugins ini yema hierarchical makomendi.
Kukadzi 26, 2007 na9: 33 PM
Waita zvakanaka. Ndakaita zvimwe chete izvozvo. Ngatione kuti inoshanda sei nevaverengi.
Mar 8, 2007 pa 6: 36 AM
Ini ndangosvika kuti ndiite zvakafanana. Ndakaisa zvakanaka nezvose. Ini ndakaisa iwo maviri mitsara mune yangu WordPress musoro:
Kwayedzwa kupinda kwacho kwakashanda zvakanaka.
Kwayedzwa WikiTravel, yakapinda rangu rakagadziriswa zita revashandisi veOpenID (alhome.net) yakandidzosera ipapo kune yangu saiti sekunge hapana chakaitika.
Ndiri kurasikirwa nechimwe chinhu here?
Mar 8, 2007 pa 6: 37 AM
Oops mitsara haina kuuya mune yakataurwa yapfuura. Asi ivo vakafanana neyako nemusiyano wedomain.
Mar 8, 2007 pa 8: 52 AM
Iwe unogona kuisa kodhi mune yekutaura tags around your code. I'll try out Wikitravel and see! It could be that they are not honoring the redirect. It's good that it came back to your site, but it should redirect to your OpenID page. tags around your code. I'll try out Wikitravel and see! It could be that they are not honoring the redirect. It's good that it came back to your site, but it should redirect to your OpenID page.